Ekuphekweni kweKhitshi ngokuTsala isitshizi, i-304 ye-Stainless High Arc eyodwa yokubamba ibrashi yeNickel Ikhitshi lokuSinki eline-Plk Plate
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Thatha iipompu zekhitshi / Iibhobho zokupheka zasekhitshini ezinokuTsala isitshizi, 304 Insimbi engagqwaliyo ephezulu yeArc Isiphatho Esingatshatanga Ibhulashi yeNickel Ikhitshi lokuSinki ngeDisk Plate
ikaliwe 5.00 Kwi-5 esekelwe kuyo 4 amanqaku umthengi
(4 ncomo ngumthengi)
304 Stainless Ikhitshi Faucet
Yenziwe ngentsimbi ye-SUS yentsimbi engenasici, itephu yasekhitshini yokuphuma yanamhlanje lukhetho olufanelekileyo lokwenza ikhitshi lakho lihlaziywe.
Iindlela ezi-2 zaManzi-Ukusasazeka / ukutshiza
Imowudi yokutshiza enamandla yokucoca kunye nemowudi yokuhamba ngokuzinzileyo yokugcwalisa imbiza, eyenza ukupheka kusebenze ngakumbi.
Imveliso efanelekileyo kakhulu
I-cartridge yodongwe idlulile kuvavanyo lomjikelo lwe-500,000 ukuqinisekisa ukhuseleko lwamanzi kunye nexesha elide lokuphila.
BUQINISA UBOMI BAKHO BEKITITI -I-arc ephezulu yekhitshi yesinki yokuntywila iswivels 360 ° kwaye ine-1.5 m PX yokukhupha ithumbu, eyandisa indawo yokuhlamba kwaye yenza ukupheka kube lula ngakumbi. Umdibaniso odibeneyo wokuphatha umbane ekhitshini kulula ukulungelelanisa ukuhamba kwamanzi kunye neqondo lobushushu.
UKHATHALELE IMPILO YAKHO -Ukuqhayisa ngomzimba ongenazintsimbi u-304, le eco-friendly ikhuphe itephu yekhitshi iqinisekisa ukhuseleko lwamanzi kwaye ibeke impilo yakho phambili. Ubuso beNickel obunqabileyo buchasene nomhlwa, iminwe yeminwe, ukubola, kwaye kulula ukuyicoca ngendwangu ukuze ibonakale icocekile, intle.
IIMODYU 2 ZOKUTSHATHA INTLOKO Nqumama / usasaze. Imowudi yomjelo ozinzileyo wokugcwalisa amanzi, ukutshiza okunamandla kokucoca okunamandla kunye nokuhlanjwa. I-aerator eyakhelwe-ngaphakathi ye-ABS ibonelela ngokuhamba kakuhle kwamanzi ngelixa ugcina amanzi ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50.
KULULA UKUFAKA –Impompo yasekhitshini yentengiso iza nemiyalelo eneenkcukacha yokufaka kwaye ikuncede uzifakele wedwa kwisithuba semizuzu engama-20 ngaphandle komtywini. Sikwabonelela nge-8-intshi Deck Plate (ilingana ne-1 okanye i-3 hole sink).
ISIQINISEKISO SEMINYAKA EMI-5 -Phakheji efanelekileyo eneBhokisi kunye nesiponji esijijileyo. Apha kwi-WOWOW, siyazingca ngomgangatho weefompu zethu zasekhitshini yiyo loo nto ukufakela kulula, iinxalenye zenziwe ngezinto ezisemgangathweni, kwaye yonke iodolo iza nomgaqo-nkqubo wokubuya weentsuku ezingama-90.
SKU: EVE-0071-1 iindidi: IFaucets yasekhitshini, Thatha iipompu zekhitshi tags: itepu yasekhitshini ngokudonsa isitshizi, Ikhitshi lokuKhangela ekhitshini, isiphatho esinye semibhobho yamanzi yasekhitshini, itephu yekhitshi engenasici
I-38 × 20.5 × 8 cm
304 Insimbi Engenasici
It is a ikhitshini isinki itepisi ngokukhupha isitshizi kunye nedreyini. Imveliso elungileyo enexabiso elifanelekileyo. Eyona tephu ilula endakha ndayifaka!
Ukuxabisa imali! Imveliso yanamhlanje iza nofakelo olulula kunye nemiyalelo elula. Ibandakanya zonke izinto eziyimfuneko kwaye inokulungiswa ngokulula kunye. Umbhobho wasekhitshini wokutsala ubonakala umhle kwaye umhle, kwaye kukho iindlela ezimbini zokutshiza. Amaqhosha ama-2 kwiqhina lokutshiza anokutshintsha ngokulula phakathi kwawo. Isibambo esinye esishushu nesibandayo sinokuhamba ngasekhohlo nasekunene ngokukhululekileyo. Ukuziva okupheleleyo kupholile kwaye kulula ukusula. Imbono yam yobuqu ngale mveliso kukuba iyimveliso elungileyo enexabiso nobuhle.
Kulula ukuyifaka kwaye isebenze njengoko kufanelekile. Uhlobo lwayo lufana nomfanekiso. Xa kuthelekiswa nezinye iimveliso, le mveliso ayibizi kakhulu kwaye iluncedo ngakumbi.
Ingena ngokugqibeleleyo ekhitshini lam.
WOWOW Brushed Steel Kitchen Umxhubi Tap - P ...